Oyi Box, N'èzí KAYAK, Azu KAYAK, Sup Board, Guzosie Up naa - Kuer
Iceking oyi Series m
Ife efe 1 + 1
Guzosie Up naa Board
KAYAK ụgbọ mmiri
naa ise n'elu
Swivel Rod njide
Iwepụ mkpanaka njide
ịbọ anụ Board
Tọrọ ntọala na 2012 na ala gbara osimiri okirikiri ebe nke Ningbo, China, Kuer Group a mụrụ site na echiche na onye ọ bụla kwesịrị a elu àgwà roto-akpụzi plastic ngwaahịa. Site na nke a echiche, anyị ulo oru a akara nke fọrọ nke nta ebibi roto-akpụzi ngwaahịa na ezi uche ahịa. Anyị R & D otu nwere otutu ahụmahụ nke 5-10 afọ na rotationally kpụrụ plastic ngwaahịa. Kayaks na Coolers na-nganga na-chere, megharịa, tooled, zuo okè na-emepụta site Kuer Group. Ugbu a Kuer Group nwere atọ ụdị: jụụ KAYAK, ICEKING, KUER.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ arịrịọ maka pricelist, biko dejupụta gị email na-ahapụ anyị ihe ozi na ngwaahịa na ị nwere mmasị. Anyị ga-azụ gị n'ime 24 awa.